box02blog: zawgyi-keyboard-0.3.2 release out
zawgyi-keyboard-0.3.2 release out
zawgyi-keyboard-0.3.2 ကိုမနေ့ည သန်းခေါင်ယံကျောှမှာထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အရင် zawgyi-keyboard-0.3.1 မှာပါတဲ့ zawgyi_keyboard.py နဲ့ online upgrade လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်စက်က offline ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်ပေါှစေမယ့် errors ကို fixed လုပ်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး လက်ရှိနောက်ဆုံး Zawgyi 2009 version ဖြစ်တဲ့ `Zawgyi-One_v4.20_August_26_2009.ttf` ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်၊ အသေးစိတ် အပြောင်းအလဲကိုတော့ အောက်က changelog မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။changelogv0.3.2* upgrade new zawgyi font (Zawgyi-One_v4.20_August_26_2009.ttf) by Soe Min* add error exceptions in zawgyi_keyboard.py* fixed offline causes errors* add some documentation in module* add Zawgyi_Keyboard_Layout_2009_Linux-Unix.pdfဿdownloadzawgyi-keyboard-0.3.2.tar.gzhowtoinstall guideproject homepagezawgyi-keyboard.googlecode.comsupportplease report if you found some bugs or errors. thank you.enjoy it!
Than Win NaingAugust 30, 2009 at 7:49 AMI can't see myanmar font on your site. But I can at www.soemin.net.Why not can't see for the same zawgyi font.ReplyDeletebox02August 31, 2009 at 12:51 AMum.. I think www.soemin.net has embedded font. But this wordpress blog doesn't have it.I guess if you have installed font properly in you system, you would see those font.rdgsReplyDeleteGokoolJanuary 4, 2010 at 6:17 PMကျွန်တော် ဇော်ဂျီးဖောင့်ကို Windows နဲ့ Ubuntu 9.10 နှစ်ခုစလုံးမှား သုံနေပါတယ်။ Ubuntu မှာ တော့ အဲဒီ .tar.gz file ကို terminal ကနေ install လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အခု ဇော်ဂျီးကို Windows မှာရော Ubuntu မှာပါ သုံးလို့ရတယ်။ Keyboard ကိုလည်း နှစ်ခုစလုံးမှာ install လုပ်ထားပြီ။ ကျွန်တော်က Ubuntu 9.10 ကို Windows နဲ့အတူ ကျွန်တော့် netbook မှာ dualboot လုပ်နေတာ။ ကျွန်တော် ဇော်ဂျီးကို Windows နဲ့ သုံးနေတာတော့ တော်တော် ကြာပြီ။ Ubuntu မှာတော့ အခုမှ စသုံးနေတာ။ Ubuntu မှာသုံးရတာ Windows နဲ့ ခလုတ်နှိပ်ရတာ မတူဘူး။ ခလုတ်ချင်း ကွာနေတာကို စသုံးသုံးခြင်း သတိထား မိတယ်။ တခြား Ubuntu users တွေကော အဲဒါ သတိထားမိကြရဲ့လား။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒါက ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲလား။ တဆိပ်လောက် comment လုပ်ပေးကြပါဦး။ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။ReplyDeleteဘောက်တူးJanuary 5, 2010 at 1:41 AMကို Gokool, ဘယ် zawgyi-keyboard version ကိုသုံးလဲဗျ?zawgyi-keyboard-0.3.2 version မှာတော့ original style keyboard ပါတယ်၊ သူက တချို့ကီးလေးတွေကွာတယ်၊ ဥပမာ . , ၊ ။ တို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့၊zawgyi-keyboard-0.3.3 version မှာတော့ zawgyi 2008 style keyboard ပါတယ်၊ သူက အရင်လို windows မှာ type တဲ့အနေအထားအတိုင်း type လို့အဆင်ပြေတယ်လေ။အဲဒီတော့ zawgyi-keyboard-0.3.3.tar.gz ကို download ပြီး ပြန်ပြီး install လုပ်လိုက်ပြီး စမ်းကြည့်ပါအုံး။ReplyDeleteGokoolJanuary 5, 2010 at 7:29 AMUbuntu 9.10 မှာကတော့ အဲဒီနောက်ဆုံးပေါ် 0.3.3 with Zawgyi Style Keyboard ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ 0.3.3 ကို uninstall လုပ်ပြီး 0.3.2 ကို Ubuntu 9.10 မှာ reinstall လုပ်ဘို့ guide တွေ သိရင်လည်း links တွေကို comment နဲ့ ထည့်ပေးပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ReplyDeleteGokoolJanuary 5, 2010 at 7:36 AMကျွန်တော့် အရင်က comment မှာ 0.3.2 ကို uninstall လုပ်ပြီး 0.3.3 ကို Ubuntu 9.10 မှာ install လုပ်ရမယ့် လမ်းညွန်ကို ဆိုလိုတာပါ။ ခလုပ်ချင်း မတူနေတော့ ကိုဘောက်တူး ပြောသလိုပဲ ကျွန်တော့် Ubuntu မှာ version 0.3.2 ရှိနေတာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးပဲ။ReplyDeleteဘောက်တူးJanuary 7, 2010 at 2:27 AMကိုGokool, ဟုတ်ပ ကျနောှ 0.3.3 version ကို upload လုပ်တုန်းက zawgyi_keyboard.0.3.3.tar.gz ဆိုပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အရင်က zawgyi-keyboard.0.3.2.tar.gz လေ zawgyi နဲ့ keyboard ကြားမှာ - နဲ့ _ ပဲကွာသွားတာ။ ကျနောှလဲ သိကြမယ်ထင်ပြီး ပြင်ပြီးထပ် upload မလုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတော့ zawgyi_keyboard ပဲဖြစ်ဖြစ် zawgyi-keyboard ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီဟာလေးကို သတိထားပြီး $ tar xzf zawgyi_keyboard*.tar.gz ဒါမှမဟုတ် $ tar xzf zawgyi-keyboard*.tar.gz ဆိုပြီးဖြည်ပါ။ ကျန်တာတွေကတော့အတူတူပါပဲ။ install guide က ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။ http://code.google.com/p/zawgyi-keyboard/wiki/InstallGuideForPackageWithPythonScriptအဲဒီ package name ကိုသတိထားပြီး tar ball ကိုဖြည်ပေးပါနောှReplyDeleteAdd commentLoad more...
zawgyi-keyboard-0.3.1 release out
Debian GNU/Linux time-base freezes
how to upgrade zawgyi font with zawgyi_keyboard.py...
zawgyi-keyboard-0.3.0 release out
zawgyi-keyboard-0.3.0 will be released with new fe...